१०० सैलुनका मालिक नील डेभिड संसार भरी सोरुम खोल्दै (भिडियो सहित) - Kendrabindu Nepal Online News
१०० सैलुनका मालिक नील डेभिड संसार भरी सोरुम खोल्दै (भिडियो सहित)
नील डेभिड भन्ने बित्तिकै धेरैजसोलाई याद आउँछ , हेयर स्टाइलको । फरक फरकका हेयर स्टाइल्स बनाउनेहरुका लागि यो नौलो नाम होइन । तर उनको बारेमा कतिलाई थाहा छ , को हुन् नील डेभिड ? कहाँका हुन् उनी ? कसरी उनले यस्तो काममा सफलता पाए भनेर चाहिं कमैलाई थाहा होला ।
आज हामी उनै नील डेभिडको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौं । त्यो पनि उनकै मुखबाट । केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनले उनका बिगत, सर्घष र हाल सम्मको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । थप जानकारी हेरौं यो भिडियोमा :